Mugovera 13 Kurume 2021
Chishanu 12 Kurume 2021
China 11 Kurume 2021
Chitatu 10 Kurume 2021
Sofa Dhizaini haingori fomu yekunze chete, asiwo ndeyekutsvagira pane zvemukati chimiro, ergonomics uye hunyanzvi hwechinhu. Mune ino kesi chimiro chikamu chakasimba kwazvo chikamu, uye chakatemwa chakapihwa kune chigadzirwa icho chinoripa kukosha kwaro. Kubatsira kwaGloria kune simba rekuve 100% ita tsika, uchiwedzera zvakasiyana zvinhu, zvigadzirwa uye unopedza. Iyo mikuru yekuita zvinhu zvese zvinowedzera izvo zvinogona kuwedzerwa pamwe nemagneti pachigadziko, ichipa chigadzirwa mazana emhando dzakasiyana.
Chipiri 9 Kurume 2021
Girazi Vase Yakafuridzirwa nemhando, iyo nzvimbo yeiyo Jigs yekuunganidza girazi ndeyekugadzira zvinhu zvinowana kukosha kwavo kubva kumhando, dhizaini uye zvinhu. Maumbirwo akareruka anoratidza kudzika kweiyo svikiro, nepo isina huremu uye yakasimba panguva imwechete. Mavhesi anofemerwa muromo uye akaumbwa neruoko, akasaina uye akaverengerwa. Rumbo rwegirazi kugadzira maitiro rinoona kuti chinhu chimwe nechimwe chiri muJungle Kuunganidzwa chine yakasarudzika mutambo wemitambo uyo unoteedzera kufamba kwemafungu.
Muvhuro 8 Kurume 2021
Vase Iyo Rainforest vases imusanganiswa we3 3D yakagadzirirwa maumbirwo uye echinyakare Scandinavia steamstick maitiro. Chimedu chakaumbwa zvidimbu zvine girazi rakawandisa nekusaremera husinga zungunuke hwemakara. Iyo yekuunganidza studio inofemerwa nekusiyanisa kwechisikigo, uye kuti inogadzira sei kuwirirana.
Aix Arome Cafe Cafe Svondo 7 Kurume
Wuhan Pixel Box Cinema Cinema Mugovera 6 Kurume
Opx2 Kuisirwa Optic Chishanu 5 Kurume
Kofi Muchina Kofi Muchina Espresso Muchina Sofa Girazi Vase Vase